Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Kana uri kushamisika apo kuwana zvakanakisisa mamiziyamu mu Europe, isu iwe akafukidzwa! Kana iri unyanzvi, nyika, kana nhoroondo yechisikigo, ari mamiziyamu kubva zvatataura haazorambi kukundikana katyamadza iwe. Chii chimwe, unogona kusvika kunzvimbo dzose nechitima…
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Ava musings yangu yakanakisisa midziyo yomunzvimbo zvandakaita kunakidzwa, panguva mutsigiri wangu muAustria. Ndakanga ndiripo muzhizha 2016 nokuti mwedzi 4-angu internship panguva diki kadikidiki omunharaunda NGO. The internship Zvakaitika yakanga zvikuru, that I got to meet…